Ururka Al Shabaab ayaa soo bandhigay Sawiro ku saabsan weerar Yaaqbari weyne ee Gobolka Shabeellaha hoose(Daawo Sawirada). – STAR FM SOMALIA
Ururka Al Shabaab ayaa soo bandhigay Sawiro ku saabsan weerar Yaaqbari weyne ee Gobolka Shabeellaha hoose(Daawo Sawirada).
Xoogaga Alshabaab ayaa soo bandhigay Gaadiid dagaal oo ay ka qabsadeen Ciidamada Militeriga Somalia ee ku sugnaa deegaanka Yaaqbariweyne ee Gobolka Shabeellaha hoose.
Dagaalka ay Kooxda Hubkaani kula wareegtay ayaa waxa uu dhacay bishii la soo dhaafay ee September 18, waxa ayna Kooxdu sheegtay inay ku qabsadeen hub iyo gaadiid dagaal.
Waxa ay sheegen in weerarkaasi ay Dowlada Somalia uga dileen tiro kabadan 10 oo kamid ahaa Ciidamadii la socday gaadiidka ay qabsadeen.
Kooxda waxa ay sheegtay in weerarkaasi oo dhacay Xilli aroornimo ah ayaa lagu qaaday laba xero oo Ciidamada Militeriga Somalia ku sugnaayen, sida ay sheegtay Kooxda.
wariyaashii TV-ga Universal oo xabsiga laga sii daayey